GOORYAANKA EEYAHA, ROUNDWORMS, GOORYAANKA DIXIRIGA AH, GOCONDHO, DIXIRIGA DIXIRIGA, DIXIRIGA WADNAHA OO LEH SAWIRRO - EEYAHA
Gooryaanka eeyaha, Roundworms, gooryaanka dixiriga ah, gocondho, dixiriga dixiriga, dixiriga wadnaha oo leh sawirro
Waxaa jira dhowr dirxi oo kaladuwan oo saameyn ku yeelan kara eygaaga: wareega dixiriga ah, gooryaanka gooldhalka ah, gooryaanka googo ', whipworms iyo gooryaanka wadnaha Qaar waxay ku nool yihiin xiidmaha qaarna unugyada. Gooryaamo badan wax dhib ah kuma keenayaan eygaaga haba yaraatee, oo xitaa kama ogaan doontid inay xitaa halkaas joogaan. Gooryaanka qaarkood ayaa loo dulqaadan karaa tiro yar, laakiin tirooyinka badan waxay abuuri karaan dhibaatooyin daran.
eey afrikaan rinji ah oo iib ah
Guud ahaan eeyga waa in laga daaweeyaa lixdii biloodba mar gooryaanka wareega iyo dixiriga. Iyagu waa kuwa ugu caansan, iyada oo uur-ku-taalku yahay dhibaatada ugu weyn.
Ey-yaryar waa in la daaweeyaa laga bilaabo 2 ilaa 3 toddobaad markay jiraan iyo 2-dii toddobaad kasta ka dib ilaa eeydu gaaraan qiyaastii 3 bilood jir sida ay dhakhtarkaaga kugula taliyeen daawada xoolaha lagu taliyo. Hubso inaad biyo dhigto biyo xidheenka. La hadal dhakhtarkaaga xoolaha.
WAA INAAD ka hubiso dhakhtarka xoolaha ee deegaankaaga si aad u ogaato waxa deegaankaaga ka jira, iyo sida eygaaga ama eeygaagu u baahan yahay in loola dhaqmo.
Dhammaan meelaha ay eydu joogaan, waxaa ku yaal ukun wareegsan.
Roundworms, sidoo kale loo yaqaan 'ascarids', waa midab cadaan ah. Waxay u egyihiin uun gabal spaghetti la kariyey ah, waxayna ku nool yihiin xiidmaha eygaaga. Waxay gaari karaan ilaa siddeed inji oo dherer ah (20cm) waxayna quudin karaan cunnada eygaaga, xiidmaha. Roundworms waxay si joogto ah u daadisaa ukunta. Waad daaweyn kartaa eygaaga wareega gooryaanka lixdii biloodba mar, AMA waad tijaabin kartaa oo kaliya waad daaweyn kartaa haddii eeygaagu haysto.
Roundworms waxay u haajiraan dhiigga oo dhan sambabada , waa la qufacayaa, badanaana dib ayaa loo liqayaa. Mararka qaarkood dirxiga wuxuu ku dhex mari karaa beerka iyo maskaxda.
Weligaa ma arki doontid gooryaankaas, oo maalin maalmaha ka mid ah ayaa laga yaabaa inay ku soo baxaan saxarada eyga. Waxay sababi karaan dibiro, shuban iyo matag. Eygaaga ayaa laga yaabaa inuu joojiyo cunista, ka dib marka uu ka gudbo marxaladda xad dhaafka ah, iyo had iyo jeer inuu gaajoodo.
Ey yaryar oo yaryar oo aan la daaweyn ah oo ah dixiriga wareega ah ayaa sababi kara in mindhicirku dilaaco. Eydu waxay ka helaan dixirigoodu hooyadooda, maxaa yeelay gooryaanka dirxiga waxay u guuraan ilmo galeenka, ama ilmaheeda. Biyo xireen uur leh ayaa laga daaweyn karaa dixiriga wareega, waana inay noqotaa. Weydii dhakhtarkaaga xoolaha.
Eeyaha waa in laga niyad-jebiyaa inay saxaroodaan meelaha ay caruurtu ku ciyaaraan, maaddaama dixirigoodu si gaar ah khatar ugu yahay carruurta. Ukunta wareega waxay ku jiifsan kartaa sanduuqa ciidda sanado badan. Markay galaan ilmaha martida loo yahay waxay u haajiraan ubadkooda beerka, sambabaha, indhaha ama maskaxda waxayna noqon karaan kuwo si joogto ah u qarsoon.
Tapeworms (Taenia iyo noocyada dipylidium)
Gooryaanka loo yaqaan 'Tapeworms' waxay u egyihiin xabbad bariis ah saxarada laakiin kuma jirto, ama mararka qaarkood waxaa la arkaa iyagoo u eg ukumo cad cad oo eyga dabada ka jooga. Eeyaha leh dixiriga gooryaanka badanaa mootada guud ahaan sagxadda .
Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo ah dixiriga diillinka. Xayawaanka qaado dixiriga, sidaa darteed haddii eeygaagu leeyahay boodh, ama uu leeyahay boodh, waxaa jira fursad wanaagsan oo uu ku yeelan karo dixiriga eeg boodh qoris ). Sidoo kale haddii eey cuno boodada waxa ku dhici kara dixiriga.
Gooryaanka caadiga ahi had iyo goor ma dili dixiriga, sidaa darteed dirxi ka xoog badan ayaa loo baahan yahay.
Dhakhaatiir badan oo xayawaan ah ayaa kugula talinaya dixiriga uurka iyo wareega gooryaanka 6-12 biloodba mar.
Ma daaweyn kartid biyo xireen uur leh ama kalkaaliso caafimaad, ama eey yaryar oo loo yaqaan 'tewworm'.
Sida gooryaanka wareega oo kale, dadku sidoo kale waxay heli karaan dixiriga. Dadku waxay ka heli karaan gooryaanka markay cunaan bahal ka soo baxa eyga, taas oo aan adkayn tixgelinta boodada ay aad u yar tahay, waxay si fudud ugu degi kartaa saxankaaga, ama gacantaada, oo lagu dari karaa iyada oo aan la dareemin. Cajalad-cajaladdu khatar kuma aha eeyga, dadka qaar ayaa ku tilmaama inuu yahay dulin caaqil ah, laakiin waxay ku noqon kartaa khatar dadka, taasoo sababi karta cudur beerka ah oo daran.
bulldog american iyo feeryahan isku qasan eeyo yaryar oo iib ah
Dareenka cajaladdu wuxuu runtii ka kooban yahay qaybo badan oo cad, oo isugu jira sida cajalad oo kale. Way wada duubaan oo waxay dherer ahaan noqon karaan dhowr dhudhun. Kadibna waxay u dhacaan si ay u tarmaan. Waa qaybaha loo arko inay daadinayaan. Qeybahan waxaa ku jira ukumo u eg miro bariis ruxaya.
Eeg inbadan Sawirada Tapeworm
Waxay umuuqataa ubax wareega, laakiin waxay leedahay ilko gees ka gees ah oo qabsanaya mindhicirka eyga oo isku dhejinaya lixda ilkood ee fiiqan, oo cabaya waxay martida u yihiin dhiig. Waxay bedeshaa goobta ku xirnaanta ugu yaraan lix jeer maalintii. Waxaa jira dhiig daadasho si loo quudiyo gooryaanka dhiiga daadanaya, laakiin dhiiga intiisa badan waxaa lagu lumiyaa dhibcaha go'idda ilaa ay bogsadaan, sidaasna ku keento dhiig yaraan iyo bir yaraanta. Haddii aan la daaweynin gocondada goglan waxay dili kartaa eey, gaar ahaan eey. Eeyadu waxay ku heli karaan dixirigoodu caano hooyooyinkood. Haddii qaar ka mid ah eeyaha yaryar ee ku jira qashinku ay dhinteen, gooryaanka waa in loo tixgeliyaa inay yihiin sababi suurtagal ah. Gooryaanka waa in lagu celiyaa qiyaastii 30 maalmood maadaama dixirigu dilo oo kaliya dirxi ku nool jidka GI. Gooryaanka labaad wuxuu dilaa dixirigoodu ku jiray geeddi-socodka socdaalka, kaas oo dhammaystiri lahaa meertadooda muddadaas. Haddii aadan ku celcelin dixiriga bil gudaheed dixirigu mar kale ayuu la wareegi doonaa mindhicirada.
Hookworms iyo whipworms waa dhiig joojiye. Kuwani waxay ka dhigi karaan dhiig-yar yar eey yar.
Wadnaha Gooryaanka (Uncinara)
Gooryaanka wadnuhu waxay ku nool yihiin wadnaha iyo xididdada dhiigga ee waaweyn. Waxay yihiin qiyaastii lix inji Waxay ku faafaan kaneecada. Kaneecada geedka-godka, oo ku dhasha geedaha geedku, waxay aad ugu wanaagsan tahay fidinta gooryaanka wadnaha. Waxay ku nool yihiin meelaha geedaha geedku ka baxaan. Haddii aad deegaankaaga ku leedahay geedo geed ah, waxay u badan tahay inaad ku nooshahay meel ay ku yaal gooryaanka wadnaha. Gooryaanka wadnuhu ma muujiyaan wax calaamado ah illaa iyo inta cudurku aad u horumarsan yahay. Markay astaamuhu u muuqdaan waxay la mid yihiin astaamaha wadnaha oo istaaga - mararka qaarkood waxay keenaan suuxdin, qufac, neefsashada oo ku adkaata, jaakad caajis ah, tamar la'aan, iyo calool weynaan. Gooryaanka ayaa laga hortagi karaa. Eeyaha waa in laga baaraa gooryaanka wadnaha, ka dibna la siiyaa daawo ka hortag ah. Xikmad ma aha in la sugo illaa inta astaamuhu ka muuqanayaan ka hor inta aan la daweyn dixirigan khatarta ah La hadal dhakhtarkaaga xoolaha.
Dhammaan eeyaha waqti ka mid ah noloshooda waxay leeyihiin dirxi, laakiin daaweyn casri ah, si fudud ayaa loo tirtiraa, oo aan waxyeello u lahayn xayawaankaaga. HADDII DHAMMAAN eeyaha si joogto ah looga daaweyn jiray gooryaanka, halista caafimaadka aadanaha aad baa loo yareyn karaa.
Ma ahan kuwa indhaha u muuqda. Baadhista Vet kaliya.
Ka soo horjeedka waxa magaca ka muuqata, ringworm maahan dixirigoodu. Waa caabuq fangas ku dhaca maqaarka oo ku faafa eeyaha kale, xayawaanka iyo dadka. Waxaa jira dhowr daaweyn oo kala duwan oo ay ku jiraan baaruud baaruud ah oo laga iibsan karo dhakhtarka xoolaha. Qaab dhammaystiran ayaa ah in la isticmaalo saliid neem la mariyo ah oo la caddeeyay inay disho noocyo kala duwan oo ah fungus iyo caarada. Waxay sidoo kale u shaqeysaa sida cayayaanka looga celiyo. Mane Tail Groom (M-T-G), oo asal ahaan loo isticmaalo fardaha, sidoo kale waa badbaado oo waxtar u leh in loo isticmaalo fungus ringworm.
Finan wormworm eey
madow iyo cadaan dapple dachshund
Fo Xarunta Macluumaadka eeyga eey ® Dhammaan xuquuqda dhowran
Eeg tusaalooyin badan oo ah Tapeworm
Waa maxay sababta eydu u jiidayaan badhida Dabaqa
La Dagaalanka Dacarta Cabsida leh
Inbadan oo ku saabsan Dhirta
Shubanka Eeyaha iyo Eeyaha
chiwawa iyo weiner ey isku darka
Dahab dahab ah cunug yar oo yar
sarkaal dahabka qasan spaniel Cocker a
boqorka weyn ee cavalier charles spaniel
sawirada boqor charles cavalier